भूमिही’न र सु’कुम्बासीलाई जग्गाको पुर्जा दिने प्रक्रिया सुरु गर्यो ओली सरकारले ! – NepalajaMedia
January 24, 2021 241
सरकारले भूमिहीन दलित र सुकुम्बासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने प्रक्रिया थालेको छ । भूमि सम्बन्धी समस्या समधान आयोगले सातै प्रदेशका विभिन्न स्थानीय तह तोकेर भूमिहीन दलित र सुकुम्बासीको विवरण मागेको छ ।
सरकारले १८४ जनालाई जग्गाधनी लालपुर्जा वितरण गर्ने निर्णय गरेको छ । बुटवल उपमहानगरपालिकाका वडा नं ६, ७ र ८ का बहलवाला विटौली, कोदालेले मात्र जग्गाधनी लालपुर्जा पाएका छन् भने बाँकी अन्यले पछि लालपुर्जा पाउने छन् ।
Prevहार्दिक बधाई : यी हुन् डिग्री पास गर्ने चेपाङ समुदायकै पहिलो चेली सितामाया !
Nextपाठेघरमा क्यान्सर भए नआत्तिनुस्, त्यो निको हुन्छ